RememBear: Password ကို Manager ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လုံခြုံရေး & သီးသန့်လုံခြုံရေး Apps ကပ » RememBear: Password ကို Manager က
RememBear: Password ကို Manager က APK ကို
လှပတဲ့ RememBear app ကိုစတိုးဆိုင်ဖန်တီးရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, သင်၏ devices တွေကိုဖြတ်ပြီးတကယ် Strong password များကိုသုံးပါနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအွန်လိုင်းနေဖို့။ ဒါဟာအစမြန်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်များအတွက်အကြွေးကဒ်များကိုသိမ်းဆည်းခြင်း, လုံခြုံရေးတစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အလွှာနှင့်အတူအထိခိုက်မခံမှတ်စုများကိုကာကွယ်ပေးသည်။
* အလိုအလျောက် login: RememBear Auto-ဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့ login သတင်းအချက်အလက်များသင်အကြိုက်ဆုံး apps များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကိုဖြတ်ပြီးအားဖြင့်သင်တို့ကိုအချိန်ကုန်သက်သာ
* မြန်အွန်လိုင်းငွေသိမ်းကောင်တာ: အွန်လိုင်းစျေးဝယ်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့အကြွေးကတ်များ Autofill
* တစ်စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်ဘယ်တော့မှ: တစ်ခုတည်းရာအရပျ၌သင်တို့၏စကားဝှက်များ Save နှင့်ကို un-ဝက်ဝံ-နိုင်ခဲ့စကားဝှက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းမှနှုတ်ဆက်ပြောပါ
* Store ကိုအထိခိုက်မခံမှတ်စု: လုံခြုံရေးအပိုအလွှာလိုအပ်သောသူတို့ကိုမှတ်စုတစ်ရာအရပျ
* သင့်ရဲ့ဒေတာကိုဘေးကင်းလုံခြုံ Keep: သင်၏ login အားလုံးသာသင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ကိုစာဝှက်ထားတဲ့ Vault ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်
* ကာကွယ်ဆေးသူခိုးတွေ: တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့သင့်အွန်လိုင်းအကောင့်အားကောင်းတဲ့, ထူးခြားတဲ့ passwords များကို Generate
နေရာတိုင်း * Access ကို: သင့်ထမ်းရွက်အားလုံးသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ, ဖုန်း, နှင့် tablet ကိုဖြတ်ပြီးတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေသည်
* Friendly ဒါကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ချဉ်းကပ်ဒီဇိုင်းပင်ဝက်ဝံအသုံးပြုရန်နိုင်!
* Touch ကို ID သို့မဟုတ် FaceID နဲ့လုံလုံခြုံခြုံသင့်ရဲ့ Vault Unlock
ထမ်းရွက်လှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာ * အော်တို-lock
* တစ်ဦးကတစ်ခုတည်း Master Password ကိုသင်သည်သင်၏ Vault သော့ဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်
* သီးခြားစစ်ဆေး: RememBear လွတ်လပ်စွာကြောင့်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံရေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီစေရန်တစ်ဦး 3rd ပါတီစာရင်းစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်
* ဒီဇိုင်းအားဖြင့်သီးသန့်လုံခြုံရေး: သင်နိုင်အောင်အင်ဂျင်နီယာ, သာသငျသညျ, သင့်အထိခိုက်မခံ data တွေကိုတွေ့နိုင်ပါသည်
* ပြင်းထန်လုံခြုံရေး: RememBear စူပါခိုင်မာတဲ့ AES 256-bit encryption နှင့်အတူသင့်ရဲ့ဒေတာကိုကာကွယ်ပေးသည်
တိုင်း RememBear အကောင့်အခမဲ့ RememBear ပရီမီယံ၏ 30 ရက်ပေါင်းနှင့်တကွကြွလာ။ သင်သည်သင်၏ထမ်းရွက်နှင့်အတူမေတ္တာ၌ကရြောကျလြှငျသငျပရီမီယံ (ရရှိနိုင်ပါသည်လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်အစီအစဉ်များ) နဲ့ဆက်လက်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ဘာမျှမနှင့်သင့်အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်ကိရိယာ Backup တွေကိုနှင့်ဦးစားပေးထောက်ခံမှုကိုအကြားထပ်တူပြုခြင်းဖယ်ရှားပေးထားတဲ့အခမဲ့သို့လျှော့ချလိမ့်မည်ပါနဲ့။
မူပိုင်ခွင့်မူဝါဒ & အသုံးပြုရန်သတ်မှတ်ချက်
RememBear သင်ဒီမှာဖတ်နိုင်အသုံးပြုမှုရိုးရှင်းတဲ့, လူ့ဖတ်လို့ရအောင် privacy ကိုမူဝါဒနှင့်စည်းမျဉ်းများရှိပါတယ်:
MISBEHAVING ဝက်ဝံ? ထိတွေ့ GET လိုပါသလား?
သင့်ရဲ့ထမ်းရွက်ခက်ခဲဖြစ်ခြင်းလား? သငျသညျကြှနျုပျတို့အတှကျအတုံ့ပြန်ချက်များရှိပါသလား? သင်မျှဝေဝက်ဝံအကြောင်းကိုတစ်ဦးအေးမြတကယ်တော့ရှိပါသလား? www.remembear.com/support မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ
* Subscriptions သင်၏ Google / Play စတိုးအကောင့်စွဲချက်တင်နေကြသည်နှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Auto-သက်တမ်းတိုးဖို့။ သင်သည်သင်၏ subscription ကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင့် Play Store မှာ Settings ကိုသွားနေဖြင့်မည်သည့်အချိန်က Auto-သက်တမ်းတိုးဖို့ကို turn off နိုင်ပါတယ်။
NEW! Password ကိုမျှဝေခြင်း
Poppa ထမ်းရွက်အမြဲတမ်း Netflix နဲ့ password ကိုတောင်းသလဲ? ဒီတစ်ခါလည်း Boo Bear သူမ၏အီးမေးလ်တစ်စောင်ရဲ့ login မေ့ထားမည်လား သငျသညျယခု encrypt လုပ်ထားလင့်များအစားလွင်ပြင်စာသားကိုနဲ့လုံလုံခြုံခြုံသူတို့အား passwords များကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။ အလိုအလျှောက်အပေါငျးတို့သ link ကို Self-ဖျက်ဆီးခြင်း၏အကောင်းဆုံး!
- 9.34% ပိုမိုဝက်ဝံ
RememBear: Password ကို Manager က
36.33 ကို MB
ဘေးကင်းလုံခြုံမှတ်စုများ - ...